Khadadka Magaalada Istanbul Ferry Ferry ayaa u gudbay Jadwalka Jiilaalka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIsticmaalka Dhismaha Magaalada Istanbul Ferrari-yada ayaa dhaaftay Tariffka Xilliga
17 / 09 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Degmada kumbuyuutarka ee magaalada caasimadda ee City Lines kicineysa taariikhda 17 waxay tagtay jadwalka jiilaalka ilaa Sebtembar. 8 iyo qiimaha jiilaalka nuska ah 21 ama xitaa 600 ayaa loo qorsheyn doonaa maalin kasta. Maalinta ugu horeysa ee dugsiga waa bilaash inta udhaxeysa saacadaha 06.00-14.00.
Laynka Magaalada, oo ah kantarooli oo ka tirsan Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa dhammaystirtay diyaarintiisa shaqo ee qaboobaha. Bishii Sebtembar, 17, oo dugsiyadii la furay, ayaa bilaabay jadwalka jadwalka gaadiidka magaalooyinka.
MAGAALOOYINKA LAGU QAADO
Jadwalka jiilaalka 2 wuxuu socon doonaa ilaa June 2019. 8 ayaa sii socon doonta nus bil iyo jadwalka jiilaalka ayaa kordhin doona tirada safarka gaadiidka badda ee magaalooyinka. Kadikoy, Karakoy, Eminönü, Beşiktaş, Üsküdar, Adalar, Halgan iyo Bosphorus iyo sidoo kale Emirgan-Cengelkoy, Sarıyer-R. Kavağı-Anadolu Kavağı, Kirküksu-Beşiktaş, İstinye-Küçüksu, Üsküdar-Ortaköy, Bostanci-Karaköy, Emirgan-Çengelköy, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı halkalı uçuşları paralel olarak yapılacaktır. Guud ahaan, celceliska safarada 21 ayaa maalin walba la sameyn doonaa iyada oo loo marayo 600 khadadka kala duwan.
BOSTANCI CONNECTED TIMES WAXAA LOOGU TALAGALAY CIIDAMO
Canshuurta jiilaalka waxaa la siin doonaa beelaha Princes 'Islands oo ka kala socda Eminönü iyo Beekiktaş. 4 safar ka socdo Besiktas oo u socdaalay jasiiradaha Princes 'ee subaxda iyo fiidkii. Waxaa intaa dheer, duulimaadyada Eminonu-Kadikoy-Adalar ayaa la qabanqaabin doonaa inta lagu jiro maalinta. 1 Bishii Abriil ilaa dhammaadka jadwalka xilliga jiilaalka ee gelinka dambe ee Habada iyo Heybeliada ee Kadikoy iyo Eminonu, Eminonu iyo Kadikoy Kinalıada-Burgazada-Heybeliada iyo Büyükada'ya duulimaadyo dheeraad ah oo la qorsheeyay. Safarku wuxuu ka tagi doonaa 19.30 ka Boosaaso iyo 21.30 oo ka socda Eminönü.
Adeegga Baabuurta Fudud
Mid ka mid ah bedelaadaha isgoysyada isgoysyada waa safarada 106 maalmaha todobaadka ee Istinye-Cubuk Ferry Line. 20 waxaa lagu dhimi doonaa daqiiqado 15 saacado-saacad ah.
WAQTIGA LACAG LA'AAN AH
Iyadoo la raacayo go'aanka Golaha Degaanka ee Istanbul, Magaalada Lines waxay siin doontaa adeeg bilaash ah oo u dhexeeya 17 iyo 06.00 Isniinta Isniinta, sida dhammaan gaadiidka dadweynaha ee ku xiran IMM. Laga soo bilaabo buugyaraha tariffka ku saabsan shaahyada ilaa xariiqa iyo safarka safarka 14.00 jiilaalka jiilaalka ee magaalada, oo leh ALO 2018 White Table www.sehirhatlari.istanbul bogga.
Halkaan waxaa ah naqshadeynta cusub ee Istanbul
Ku soo Dhawo Saaxiibada Kitaabka Quduuska ah ee Beeralayda
Teleferik ayaa u gudubtay jadwalka jiilaalka
Nidaamka tareenka ee Samsun ayaa soo maray jadwalka qaboobaha ... Halkan waxaa ah waqtiyada taraamyada cusub
Adeegyada Boostada ee Magaalada Istanbul
Duqa magaalada Kocaoğlu: Ma sheegi karno dhibaatadayada kudhowaad IJBAN Koca
Tallaabooyinka Imtixaanka Sannadka Cusub ee IMM